I-Geoinformatics 6, ininzi kubavavanyi-iGeofumed
Ikhaya/Geospatial - GIS/I-6 Geoinformatics, eninzi kubaphenyi
Geospatial - GISGPS / IzixhoboTopography
Uhlelo olutsha lweGeoinformatics yomhla kaSeptemba sele luphumile 2007 2008.
Makhe siqwalasele ngokufutshane imixholo emininzi enomdla; Nangona ndincoma ukuba ufunde uguqulelo lwe-intanethi, olukumaphepha angama-84 afanele ukugaywa kunye nexesha, banokukhutshelwa njenge-pdf nangona inobunzima obumalunga ne-19 MB.
Lelo ligama lomhleli ka-Eric van Rees owathi, emva kokuya kwinkomfa ye-ESRI eSan Diego, kulindeleke ukuba anikele ngaphezu kwesiqingatha sephepha kuyo; Ngokuchasene noko, kubonakala kubandakanyeka kwi-Topo roll, iboniswa yikhava kunye nobuninzi bomxholo.
Topcon IS-03 Uphononongo
Eli linqaku ekubonakala ukuba lelokuqala kuthotho lophononongo oluya kwenza izikhululo ezipheleleyo zerobhothi; kulo mzekelo Topcon IS-03.
Uphononongo lusekelwe kwi: Luluphi uhlobo lwamaxwebhu omsebenzisi, ukubonakala ngokubanzi, indlela yokusebenzisa umsebenzisi, ulawulo lwefayile kunye nomthamo womsebenzi wentsimi.
Ngomnye wemixholo ethe yanditsala kakhulu, ngakumbi kuba luchungechunge oluqokelelweyo ukuba baya kuqhubeka namanye amaqela asuka kwezinye iibrand; Eli phephancwadi liphinda liphonononge i-Hemisphere XF101 kunye ne-Archer, eziziitekhnoloji zokubanjwa kweselula.
IsiXekoGML; I-Smart 3D, enikezelwa ngu-Sam Bacharach we-OGC
Ukunika amandla i-GeoWeb, nguMrhumo kaJames
Olunye uphononongo kunye nezihloko:
Umahluko Kabini... Ababoneleli ngenkonzo ye-RTK, kwaye kuthetha ukuthini ukuyeka emva kwedatha kaGalileo.
Umlinganiselo womgama, inqaku elibuza ukuba babhekisa phi abathengisi abakhulu beemveliso zetekhnoloji kwipografi: iTrimble, iPentax, iLeica, iMagellan, iSokkia,
Isizukulwana esilandelayo setekhnoloji yokubamba lasser Ndicebisa ukuba ujonge ngakumbi kule.
Udliwano-ndlebe ne-geokosmos, emva kwenkongolo ye-ISPRS eBeijing
Udliwano-ndlebe noGeomax, izixhobo zokuhlola imveliso ephezulu
Ubuchwephesha beTopography kumanxweme
I geolocation ngokusekelwe kwiinkonzo
Kodwa ke ndoda, ukuba ngala macebiso abahambi ngqo apho ... Andazi ukuba yintoni enye imagazini enokuzisa.
Ukungenisa itafile yokulungelelanisa nge-GIS ebonakalayo
Ungandixelela ukuba i-trimble okanye i-topcon gps engasebenzisi iintambo zoqhagamshelwano kunomathotholo, into efana nebluetooth
yomhla kaSeptemba 2007? mhlawumbi ngo-2008.